Hevitra MPANOHARIANA | 157
Nalahelo ny mpanao taozavatra
2007-04-12 @ 09:39 in Toekarena
Ataoko fa mahatadidy ilay hatezeran’ny filoha Ravalomanana isika tamin’ny varotra fampirantiana natokana ho an’ny mpanao asa tanana malagasy Salama iny. Nampanantena ny handoavana ny saram-panofana ny tranoheva moa ny filoha tamin’izany fotoana izany saingy mandraka ity androany toa tsy hita izay tohiny. Nanomboka tamin’iny fotoana iny ihany koa dia tsy nisy intsony ny Salama araka ny fitadidiako aloha. Nanao ny azy manokana amin’izay ireo mpanao asa tanana ireo.
Ny anarana entin-dry zareo ary rehefa miaraka mampiraty ry zareo dia antsoiny hoe Showgasy. Nandritra iny herinandron’ny Paska iny no nihetsiketsehan-dry zareo ary tao amin’ny kianjan’i Mahamasina ambadiky ny Tribune ry zareo no mampiraty ny vokatry ny asa tanana. Maimaipoana ny fidirana amin’izany fa tsy mba tahaka ny « varoboban’i entana sinoa » antsoina amin’ny teny mahazatra hoe Grande Braderie andrombahana ny friperia avy any ivelany izay Ar1000 ny fidirana.
Na dia izany aza dia tsy liana mihitsy ny olona, angamba noho ny fahenoana ny anarana fotsiny hoe Malagasy, fa dia mitovy hoy ny mpikarakara ny isan’ny vahiny sy ny Malagasy mitsidika ary ny zavatra mora entina ihany no vidian’ny olona. Izany tokoa ve no mahamasaka ny fiheverana hoe ny mora tsy mba tsara ka aleo ny mora an’ny vahiny toy izay ny maimaipoana an’ny Malagasy ?
Mety ho diso paika ihany koa angamba ny mpanao taozavatra. Rehefa tsy ny varotra eo no ho eo no azo dia tsara kokoa raha mitady fifanarahana maharitra handefasana ny entana, na handafosana ny entana no ilofosana ka rehefa tsy taitra ny Malagasy dia aleo ny vahiny ihany no ho mpanjifa e ! aleo ampitsiriritiny amin’ny vokatry ny tena ihany izay tsy mbola mahatsapa ny hasarobidin’ny asa voakaly nataon’ny Malagasy.
Dia miverina ve?
2007-04-11 @ 09:25 in Ankapobeny
Mahatsikaritra ve ianareo fa tena mivoatra be ny fijery ny blaogy.com? izaho ihany koa dia mahatsikaritra izany. Tsy mahalala loatra ny amin'ny resaka teknika aho aloha fa izay mahafinaritra kosa no lazaiko etoana e! Mety ho misy ny zavatra mahasosotra ato tsy ho vitany (mbola tsy hitako aloha) fa na ny endrika miseho hitanareo na ny endrika ato amin'ny fanoratana ato dia mahafinaritra avokoa. Hita tokoa ny fiezahana ataon'ny mpikarakara koa dia isaorana indrindra.
Ataoko fa tsy mitsanga-menatra mihitsy isika Malagasy mahita izao ezaka ataon'ny mpikarakara ny serasera.org izao. Maniry indrindra mba hitohy izao ezaka izao ary tsy ho kivin'ny mety ho fahasahiranana isankarazany isika. Koa asakasakareo izay tsy te-hanandrana aloha fa lasa ato indray aloha no tena mahafinaritra ahy e!
«Mialoha 1 2 3 ... 152 153 154 155 156 157 158 Manaraka»
Famantarana eny an-danitra